ट्राफिक चेकिङमा सुकसुकाउँछन् मापसे महिला (भिडियोसहित) - TV Annapurna
August 12, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
शर्मिला सुवेदी /टिभी अन्नपूर्ण
साउनको अन्तिम शनिबार । राती करिब १० बजेको थियो । नारायणहिटी दरबार सग्रालयको साईडमा एक युवती मापसेमा परिन् । अनुनयविनयको भाकामा सुकसुकाउँदै थिइन् । हो मैले गल्ती गरे जस्तोसुकै सजाँय भोग्न तयार छु । तर मेरो लाईसेन्समा प्वाल नपारिदिनुस् ।
लाईसेन्समा प्वाल पार्न नहुने अनुनय गर्ने युवती चिन्ता थियो म बाहुनकी छोरी रक्सी खाने बानी थाहा पाए मेरो बिहे हुदैन । ट्राफ्रिकले जिस्कदैं सोधे अनि लाईसेन्सको प्वाल कसले हेर्छ त बिहेमा ? तुरुन्तै जवाफ फर्काईहालिन बिहेपछि श्रीमानल थाहा पाए भने ?
केही बेरमा ठमेलतिरबाट अर्को स्कुटर हुईकिदैं आयो । बा ७८ प ६१४२ नम्बरको स्कुटरमा तनहुँकी अनुमति नेपाली सवार थिईन । ट्राफ्रिक प्रहरीले उनलाई च्याप्प समात्यो । उनले भन्दै थिईन म कलाकार, बिए बढ्दै छु । साथीले झुक्काएर रेडबुलमा रक्सी मिसाएर खुवाएछ । प्लिज मेरो लाईसेन्स दिन्न । जे गर्न छ यहि बिलबुकका आधारमा गर्नुस् । ट्राफिक प्रहरी र उनिबीच निक्कैबेर गलफत्ती चल्यो । तर उनको केही सिप लागेन प्रहरीले बिलबुककै आधारमा चिट काट्यो र लाईसेन्स लिएर प्वाल पार्न आउन आदेश दियो ।
नेपालमा बढ्दो मदिरा कल्चरले मापसे महिलाको बिगबिगी बढेका यी त प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन ।
६ वर्ष पहिलेदेखी ट्राफिक प्रहरीले शुरु गरको मापसे अपरेशन अभियानमा दैनिकजसो दर्जनौं यस्ता घटना हुने गरेका छन ।
मादक पदार्थ सेवन गर्ने, सवारी हाँक्ने र कारबाहीमा परेपछि गलफती गर्ने सङ्ख्यामा पुरुष बढि भएपनि महिलाको सङख्या समेत उल्लेख बढेको छ ।
सङख्यात्मक हिसावले यसमा पुरुषको सङख्या निक्कै धेरै भएपनि मापसे चेकिङमा परेपछि अनौठा दृश्य भने महिलाबाट नै प्रर्दशित हुने गरेका छन ।
गएको ६ महिनामा मात्रै १५ सय ४२ महिला मापसे गरेर सवारी हाँकेर कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जबकि, सोही अवधिमा मापसे कारबाहीमा पर्नेहरुको कुल संख्या भने १ लाख ५६ हजार नाघेको छ । माहानगरीय ट्राफिक प्रवक्ता सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली भन्छन, “संख्या ठुलो होइन तर पनि यसले धेरै शहरी महिला मापसे गरी सवारी हाँक्छन् भन्ने देखाउँछ ।”
प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अघिल्लो बर्षभन्दा यसपालि मापसे गरेर सवारी हाँक्ने महिलाको संख्या बढेको देखाएको छ । जबकि, यसबीचमा मापसेविरुद्ध ट्राफिकले सबैभन्दा धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा ३३ महिला सवारी चालक मापसेका कारण कारबाहीमा परेका छन् । मैनाली भन्छन, “सुन्दा असामान्य जस्तो लाग्छ तर मदिरा सेवन गरेर सवारीसाधन हाँक्ने महिला कारबाहीमा परेपछि उम्कन निक्कै गलफत्ति गर्दछन ।”
यसैगरि सोह«खुट्टेको ओरालोमा मापसेमा पक्राउ परेपछि मास्क लगाएर उभिएकी महिला भन्दै थिईन ।
कारबाही गर्नु ठीक तर लाइसेन्स प्वाल पार्नु बेठीक । उनको तर्क थियो, “, मदिरा सेवन गर्नु महिलाको स्वतन्त्रताको कुरा हो ”
आक्रोशित हुदैं प्रश्न गरिन “ पुरुषले रक्सी खान हुन्छ भने महिलाले किन नहुने ?
। सुरुका दिनमा भेटिएका केही महिला मापसे देख्दा आफैँलाई अचम्म लागेको अनुभव सुनाउछन ट्राफिक प्रहरी नायव निरिक्षक जीत केसी । कस्ता कस्ता मान्छे कारबाहीमा पर्लान् भनेर । “सुरुका दिनमा त ट्राफिक प्रहरी नै छक्क पर्थे, महिला पनि मापसे कारबाहीमा परेको देख्दा,” “तर, यो पनि सहरी जीवनको एउटा अंग रहेछ ।” मापसे गर्ने र सवारी हाँक्न पनि हिम्मत गर्ने महिलाको संख्याले सहरी समाजका महिलाको सोच, चेतना र आधुनिकतालाई मापन गर्न सहयोग गर्छ ।
मापसे सेवन गरेर सवारी हाँक्नेहरु सबैभन्दा धेरै दरबारमार्गमा पक्राउ पर्छन् । त्यसको कारण दरबारमार्गमा रहेका पब, डिस्कोथेक र राती अबेरसम्म खुल्ने रेस्टुराँ नै हुन् । दरबारमार्गमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक मुकुन्द मरासिनीसँग मापसेमा समातीएका महिलाले गर्ने व्यवहार र तिनका तर्कका अनेकन् फेहरिस्त छन् । मदिरा पिएर सवारी हाँक्ने सेलिब्रिटीदेखि ठुलाबडाका छोरीसँग उनको जम्काभेट भइसकेको छ ।
मरासिनीका अनुभवमा मदिरा सेवन गरेर सवारी हाँक्ने महिलामध्ये अधिकांश किशोरवयका हुन्छन् । मापसे गरेर सवाररुी हाँक्ने केटीहरु केटाजस्ता उद्दण्ड हुँदैनन् । केटाहरु ट्राफिक देखे हतपती भाग्न खोज्छन्, केटीहरु भाग्दैनन् । तर, ब्रेथलाइजर (मादक पदार्थको परिमाण मापन गर्ने उपकरण) मुखभित्र राख्नै मान्दैनन् । ब्रेथलाइजरको प्रयोग गरेर मापसे जाँच्ने प्रविधि नहुन्जेल मुख नजिकै लगेर सुँघ्नुपर्ने अवस्था थियो । “त्यस बेला महिलाको मुखनजिकै गएर सुँघ्न साह्रै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो,” “अहिले सजिलो छ तैपनि महिलाहरु चेक गर्न सजिलैै मान्दैनन् ।
मापसे गरेर सवारी हाँक्ने महिलाको सबैभन्दा धेरै सुरक्षाको चिन्ता काठमाडौंका ट्राफिकलाई नै हुन्छ । मापसे गरेको थाहा पाएपछि सवारी चलाउन दिने कुरै भएन । तर, ती चेलीबेटीलाई कसरी सुरक्षित घर पु¥याउने ? प्रहरी नायव निरीक्षक केसी भन्छन “मापसे गरेका केहि महिला त आफूसँग पैसा नभएको आफूलाई केही भएमा ट्राफिक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क दिएर अड्को थाप्छन् । त्यस्तो बेला ट्राफिक आफैँले पैसा हालेर ट्याक्सी खोजेर घर पु¥याइदिनुपर्छ ।
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डको बयान सकिएन, थप ३ दिन थुनामा राख्न आदेश